Akanakisa epasirese (uye akaipisisa) mahotera matsva eumbozha
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resorts » Akanakisa epasirese (uye akaipisisa) mahotera matsva eumbozha
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Entertainment • Fashoni Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Resorts • Shopping • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
The Bulgari, Paris
Paris ndiyo yakahwina muhombe: yangove nekupinda kamwe chete (JK Nzvimbo) mumakore maviri apfuura, inotambira matatu epamusoro mana e2021.
Kunyangwe nguva dzekuyedzwa kwedenda repasi rose, 2021 rave gore rekukunda kuindasitiri yemahotera emhando yepamusoro - humbowo hwekuti chikamu ichi chinoramba chakashoreka sei.
Kunyangwe nyanzvi dzeindasitiri dzinofungidzira kuti 45% yevaitarisirwa kusvika vakanonoka kana kuverengerwa, mahotera mazhinji matsva akabuda.
Vanoongorora indasitiri yezvekufambiswa zvakanaka vakaisa vari vepamusoro gumi nevashanu vanokatyamadza vanosvika pasi rose.
Paris ndiye akahwina muhombe: angove nekupinda kamwe chete (JK Nzvimbo) mumakore maviri apfuura, inotambira matatu epamusoro mana e2021.
Zvakare, mafambiro edzimba dzemaboutique-saizi, zvidiki-zviyero mhando uye munhu, varidzi vane shungu kwazvo. Tichikoshesa kubatanidzwa kwevaenzi kupfuura zvese, iyo modhi yakasununguka yemhando yepamusoro yave kutanga gore rino, nepo hotera yemazuva ano yemhando yepamusoro inongofanira kunge iine hunhu hwakasiyana uye kunaka kwenzvimbo.
Hezvino ZVAKANAKA ZVA2021 (mune reverse order):
Iine maonero mhiri kweAo Yon Bay kunenge kwese kutendeuka, Accor's swanky new MGallery yekuwedzera inoratidzira sango-canopy spa, yekugadzira yeEuropean neThai-seafood cuisine uye imba yekutandarira yakamisikidzwa padenga remba. Ndiwo gumi nemapfumbamwe egirazi, akavanzika-dziva villas anonyanyo shamisa, asi - achiyerera zviri nyore pakati penzvimbo dzakatwasuka dzemukati nekunze, idzi dzinoratidza kuzorora-kwepamusoro, uye dzine mabhureki ekumhanya dhayire.
14. Masenzi matanhatu Shaharut, Israel
Negev Desert isina kuvhurika haisi nzvimbo iri pachena yekuvhura hotera yemhando yepamusoro, izvo zvinoita kuti ive isingakanganwike. Yakagadzika pakati pematombo nemadutu, iyi yekugara zvakanaka yekuzorora inosanganisa yakajairika Six Senses - senge yakakwira-caliber kushanyira spa varapi uye yoga studio - ine cinema yekunze uye inonyengedza kubata kwenzvimbo: chikafu chakapfuma cheIsrael, nzvimbo dzekugara dzakashongedzwa necacti, uye kunyangwe. purazi rengamera.
Zvichinyatsozvimiririra pamusha wakajairwa, wakacheneswa weGreece unodonhera kugungwa, dhizaini yaKalesma inosvikawo kune reti rebasa rinoratidzira madovecote emunharaunda uye marble akafanana akashandiswa kuvaka Athens 'Parthenon. Makeke echinyakare, akazadzwa nehuchi eMykonian loukoumade anowedzera kuchokwadi cheGreek-chitsuwa, nepo dziva rakazvimiririra, rinopisa mumusha wega wega wehuni rinoita kuti pave nekuzorora kwakazara.
12. Imwe&Chete Portonovi, Montenegro
One&Only's opulent's opulent anosvika muEurope idebut inoshamisa zvechokwadi. Gadzirisa pamhenderekedzo yegungwa padyo nenzvimbo itsva yekutandarira paKotor Bay inopenya, zvinhu zvayo zvinosiyana kubva kumabharari-echembere yekudyira uye chikafu naGiorgio Locatelli kuenda kuChenot Espace spa - pamwe nemarbly, yemazuva ano-Venetian yekupinda yekutandarira. Rombo rakanaka kuwana dziva rinonhuhwirira risingaperi, zvakare, kupfuura iro rakaiswa lavender pano.
Raffles 'yekutanga yekuIndia nzvimbo yekubuda (yechipiri, yakafanira muJaipur, ikozvino inoita kunge iri kuseri kwekupisa) inowanzo yevedza. Iyo inogara 21-acre yakavanzika chitsuwa paUdai Sagar Lake, uye inouya yakarongedzwa nemagadheni ekushongedza. Izvi zvinobatsira kugadzira mhepo inozorora inoshamisa, pamwe neseti yega yega ine dziva rayo, spa inoyevedza, inochinjika yemazuva ese yekudyira uye yekurota temberi maonero.
Pachitsuwa chisina kucheneswa, chakatetepa cheDugi Otok, iyi yekudzokera yevakuru chete inoziva. Dzimba dzayo sere dzinopenya dzakanyatsotemerwa mujinga mezvikomo kuti zvideredze kuvhiringa nzvimbo yakapoteredza olive-oil estate. Vaenzi vanogona kujoinha kukohwa kana kuona kunyura kwezuva kunoshamisa kubva kumwenje weVeli Rat; kuenzanisa izvi zvinopihwa zverustic iresitorendi yegourmet uye bar, spa uye madziva maviri.
Iyo yekutangisa Patina yekutandarira, inofambira mberi zvakanyanya yeSingapore yakavimbika Capella Hotels & Resorts, inounza atypical Maldives chiitiko. Nokuti apo vashanyi vanogona kukwira kumahombekombe, kushambira dhamu recrystalline kana kuzorora mudzimba dzepamusoro pemvura, vanogonawo kushanyira Marine Village kunotenga uye kushanyira magaraji nevamwe vaenzi venzvimbo iyi. Vegan yakanaka-yekudya uye dolphin-spotting superyacht inosimudzira iyi yakashinga yekuwedzera kune iyo archipelago.
Inotariswa nemhuri mbiri dzeItaly, iyi hotera yeboutique inofananidzira zvese zvinoita kuti Amalfi Coast ine rudo. Chic Interiors inopa nzira yekuona gungwa kubva kumakamuri makumi mana nemanomwe emawere, uye maresitorendi matatu akakwirira anokunda zvigadzirwa zvedunhu.
Iyi kero yeGeneva inoona iyo Oetker Collection yakasanganisa zvivakwa zvayo zvekumaruwa 'zvemhando yepamusoro-soro nehukama hwepedyo hwehotera diki, yemhando yepamusoro. Mukurumbira wemhando yekugadzira hunyanzvi hwechokwadi unoonekwa pano mune zvese kubva kune yakanakisa Mont Blanc maonero pamusoro peLake Geneva kusvika kuJoël Robuchon yakanaka-yekudya, uye 1,200m.2 Guerlain Spa.
Kunyangwe mambokadzi wamambo Nina Flohr ari kuseri kwenzvimbo ino 750-acre pamhenderekedzo yeBenguerra Island, musoro chaiwo kuzvipira kwayo mukusimba: mabungalows akasarudzika, Mini Mokes yekuongorora yemahara uye coral reef. Kune zvakare nzvimbo yekudyira isina tsvina, kushandiswa kwevashandi vemunharaunda padivi peiyo 3D yejecha-yekudhinda tekinoroji, inosanganisirwa yeMozambican dhizaini uye imwe hanzvadzi yemugungwa yekutsvagisa.
Heino humbowo hwekuti brand hombe, kana ikatora nguva yayo, inogona kusatya kupinza hunyanzvi muchinhu chakakosha ichichengeta hunhu hwayo. Yakazadzwa nemhepo yeMakumi maviri inodzvova - kunyanya muPalm Court ine mashizha uye yakashongedzwa yekudyira yeDeessa - Mandarin Oriental inonakidza kudzokorora yeMadrid's Ritz inosimbisa nhaka yechivakwa kuburikidza nekubika kwaQuique Dacosta uye mayunifomu aJorge Vázquez evashandi.
LVMH Hospitality inodawo kutora nguva yayo kugadzira: iyi nyowani yeParisian maison ndiyo hotera yechishanu mumakore gumi nematanhatu. Kugara muchivako cheSamaritaine, iyi yekutanga dhorobha Cheval Blanc inofanana nemadzitateguru ayo mana akanaka. Iyo yepakati-inowanikwa maison panguva imwe chete inonzwa nzvimbo-senge - ina maresitorendi; Dziva refu reParis - uye urbane, ine Dior Spa inopa maminetsi makumi matatu 'mapfuti emufaro' kune varombo.
Imwe yemahotera akanakisa emuBritain auya kuWest London. Kudyara kukuru kubva kuBeaverbrook's vanofarira varidzi (kusanganisira chokoreti-mhuri mugari wenhaka Joel Cadbury) yakatungamira kune akawanda makumi maviri neshanu.st zana remafaro mumakamuri gumi nemana, pamwe nekudyira kwakanaka kwechiJapan uye - akatorwa kubva kune vekare vekuLondon vatengesi - machira mazhinji anotamba, ekuisa nemidziyo. Chinongedzo chepamusoro chehotera, zvisinei, ndechekutonzwa sekunge yanga iri pano zvachose.
Airelles angadai akave nyore neaimbova mubati wehomwe imba kunze kweParis, ndiyo nzvimbo yayo inoshamisa munzvimbo yeChâteau de Versailles uye nekupinda kwayo kwekunze kwemaawa. Asi ese makamuri gumi nemana ekurara anofefetera anonakidza, nhamba yavo shoma ichigadzira kunzwa kwepedyo, nepo nguva fenicha, spa uye makenduru Alain Ducasse restaurant enchant.
... uye Yepasirese ITSVA ITSVA HOTERA YE2021 ndeye:
Kunyangwe iine vagadziri vakafanana - studio yekuItaly Cittero Viel - semamwe mahotera emhando yezvishongo, padhi iyi yeParisian inopa hukama hwepedyo. Sirin'i dzakaderera, mavara akadzimwa uye mwenje unokwezva. Isu tinodawo mafambiro-trunk mini-bars uye mahombe ekurara. Nzvimbo iyi, ine miti yeremoni nelawn yakafuratirwa neEiffel Tower, inoshamisa.
Kuwedzera ZVIVIRI ZVINONYANYA:
Kunyangwe ichi chisiri chivakwa chitsva, mushure memakore maviri e-£ 100m yakawedzera kugadziridzwa isu takatarisira zvinhu zvikuru. Nekudaro, zvese zvinotaridzika kunge zvakapusa uye zvemubatanidzwa sepakutanga, nepo F&B zvinopihwa zvichiramba zvinoshanda. Varidzi vanongoda kuyambuka Cadogan Square kuenda kuBeaverbrook Town House (ona pamusoro) kune humbowo hwekunakidza kwehotera yemakore makumi maviri nerimwe.
Nehurombo kuAuberge Resorts, muunganidzwa uyo LTI yagara yakakoshera zvakanyanya, iyi New Mexico yekuwedzera inomiririra isingawanzo uye inoshamisa inotsvedza. Nekushaikwa kwesevhisi, chikafu kubva pane zvakajairwa zviyero uye kunyangwe kuvaka kuri kuenderera, zvinoita sekunge nzvimbo yakavhurwa nguva isati yakwana. Nekuve iyi Auberge, zvakadaro, tine chivimbo chekuti nyaya dzese dziri kukurumidza kugadziriswa.
Lisa Grainger anoti:
Zvita 16, 2021 pa11: 51
Ndakava nechimwe chekudya chakanakisa chandakawana muLondon paCarlton Tower nguva pfupi yadarika. Saka, chokwadi, hazvina kujeka - asi chikafu chinoshamisa…